‘कोभिड–१९ को विषम परिस्थितीमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ’ |
19 Jan 2021 | मंगलबार, ६ माघ, २०७७
अन्तवार्ता बिहीबार, २२ असोज, २०७७
‘कोभिड–१९ को विषम परिस्थितीमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ’
डा. राजेन्द्र केसी बसुन्धरास्थित साउथ वेस्ट्रन स्टेट कलेजका प्रिन्सिपल तथा संस्थापक हुन् । ११ वर्ष अघि डा. केसीकै कन्सेप्ट र भिजनमा यो कलेजको स्थापना भएको थियो । पछिल्लो समय विद्यार्थीको रोजाइमा पर्दै आएको यस कलेजमा हरेक भर्ना सिजनमा विद्यार्थीको चाप बढ्छ । यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वले नै महामारी खेपिरहेको अवस्थामा नेपालका निजी शैक्षिक संस्थाहरु चपेटामा परेका छन् । यो विषम परिस्थितीमा साउथ वेस्ट्रन स्टेट कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था कस्तो छ ? कसरी र कस्ता विद्यार्थी भर्ना लिइरहेको छ ? विद्यार्थी भर्नाका मापदण्ड के छन् ? र, याे विषम परिस्थितीमा सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाका लागि के गर्नुपर्ला ? लगायतका समसामयिक विषयमा एजुकेशनसमाचारले डा. केसीसँग गरेको कुराकानी :
यतिबेला साउथ वेस्ट्रन स्टेट कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रोमा गत सालभन्दा केही फरक छैन । विद्यार्थी भर्नाको चाप उस्तै छ । हामीकहाँ देशभरका ७३ वटै जिल्लाका विद्यार्थीहरु भर्ना हुन्थे । तर, यसपाली काठमाडौं बाहिरका विद्यार्थीहरु एकदमै कम भर्ना भएका छन् । काठमाडौंकै धेरै विद्यार्थी हाम्रो कलेजमा भर्ना भएका छन् । तैपनि हाम्रो क्षमता र आवश्यकता अनुसार गत वर्ष जस्तै विद्यार्थी भर्ना भैरहेका छन् । त्यसैले कोरोनाले विद्यार्थी भर्नामा हामीलाई कुनै असर गरेन ।
यसवर्ष एसईई परीक्षाको नतिजा फरक तरिकाले सार्वजनिक भयो, तपाईंहरुले विद्यार्थी मुल्यांकनमा कस्तो मापदण्ड अपनाउनुभयो ?
विगतका वर्षहरुमा जीपीए ४ ल्याउने विद्यार्थीहरु १ सय देखि २ सयको बीचमा हुन्थे । तर यसवर्ष १० हजारको हाराहारीका विद्यार्थीको ४ जीपीएको आएको छ । त्यसैले यसपाली विद्यालयहरुले जुन खालको अंक दिए त्यो पारदर्शी भएन भन्ने मेरो पनि धारणा हो । हाम्रो विद्यार्थी भर्नाको एउटै मापदण्ड छ । हामीले ३.४ जीपीए भन्दा कम जीपीए ल्याएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिँदैनौंँ । त्यो भन्दा माथिका जीपीए ल्याएका विद्यार्थीहरुको आन्तरिक परीक्षा र अन्तर्वार्ता लिन्छौं । यसैको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छौं ।
कुन संकायमा कति विद्यार्थी लिने लक्ष्य राखिएको छ ?
हाम्रो फिक्स नै छ । हामीले १० वटा सेक्सन साइन्समा, १५ वटा सेक्सन म्यानेजमेन्टमा र एउटा सेक्सन मानविकीका लागि तय गरेका छौं । अहिलेसम्म ९ वटा सेक्सन साइन्स र ११ वटा सेक्सन म्यानेजमेन्टका लागि विद्यार्थी भर्ना भैसकेका छन् । हाम्रोमा मानविकीमा विगतदेखि नै कम विद्यार्थी भर्ना हुन्थे । यसपाली पनि ११, १२ जना विद्यार्थी मानविकी संकायमा भर्ना भएका छन् । यस्तै, साइन्समा ४ सय सीट तय गरेका छौं जसका लागि हालसम्म ३ सय ६० जना विद्यार्थी भर्ना भैसकेका छन् । यस्तै म्यानेजमेन्टमा ६ सय सीट तय भएका छन् जसमा हालसम्म ४ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भैसकेका छन् ।
कक्षा संचालन कसरी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
अनलाइनमार्फत अध्यापन गराइरहेका छौं । कक्षा सुरु भैसकेको छ । जो जहाँ भएपनि इन्टरनेटको माध्यमबाट विद्यार्थीले शिक्षा लिइरहेका छन् । अनलाइनमार्फत पढाइको अलवा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि गराइरहेका छौं । कतिपय विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा अनलाइनबाट पढाई हुने भनेपछि धेरै गाह्रो हुने हो या अप्ठेरो पो पर्ने हो कि भन्ने सोचाइ छ । तर, हाम्रा शिक्षकहरु विगतका वर्षहरुदेखि नै प्रविधिमैत्री भएका कारण उहाँहरुमा कुनै समस्या छैन । त्यसैले सहज रुपमा विद्यार्थीहरुलाई अनलाइनमार्फत अध्यापन गराइरहनुभएको छ । त्यसैले हाम्रा विद्यार्थीहरुले सिभिल एजुकेशन, करियर काउन्सिलदेखि हरेक कुरा अनलाइनबाटै पढ्न पाउँछन् । आजसम्म हामीमा शिक्षा भनेको फेस टु फेस शिक्षकले पढाउने, नोट लेखाउने, होमवर्क दिने भन्नेमात्र बुझाई थियो । त्यसैले अनलाईन शिक्षालाई विकल्पको रुपमा लिनुपर्छ ।
अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न कस्ता समस्या आउँदा रहेछन् ?
साउथ वेस्ट्रन स्टेट कलेज स्थापना कालदेखि नै पेपरलेस हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छ । त्यसैले अनलाइन प्रविधि हाम्रा लागि नौलो होइन । जसले अफलाइन मै काम गर्यो उसका लागि यो यो नयाँ भयो । हाम्रा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरुका लागि पनि नयाँ भयो तर हाम्रा फ्याकल्टिजहरुका लागि भने हो कुनै नौलो होइन । त्यसैले हामीलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या छैन ।
अहिले कक्षा ११ भर्नाको सिजन चलिरहेको बेला विद्यार्थीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
अहिलेका विद्यार्थीहरुलाई सबै थाहा छ । कुन कलेज छान्ने, कस्तो कलेज छान्ने, कस्तो जनशक्ति भएको कलेज छान्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीहरुलाई भनिरहन पर्दैन । किनभने आजका विद्यार्थीहरु प्रविधिसँग घुलमिल हुन सिपालु छन् । त्यसैले सूचना प्रविधि उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले भर्ना हुने विषयमा मैले धेरै सुझाव दिनुपर्ने छैन । तर सर्सर्ती भन्नुपर्दा कलेज छान्दा भुकम्प प्रतिरोधी भवन हुनुपर्यो, राम्रा फ्याकल्टीज भएको कलेज छान्नुपर्यो, राम्रो गुडविल भएको कलेज छान्नुपर्यो, विगतमा त्यो कलेजको नतिजा कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्यो । साथै रिडिङ, राइटिङ र लेक्चर विधिमात्र नभइकन सिभिल एजुकेशन, क्रियटिभ कुराहरु सिक्ने, आफूमा कन्फिडेन्ट डेभलप गर्ने, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय भ्रमणका देखि लिएर सबै अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत ज्ञान राख्ने र इच्छा राख्ने कलेज छान्नका लागि सूझाव दिन्छु ।
विद्यार्थीले विषय रोज्दा कुन कुन विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ ?
विषय छान्ने बारेमा म आफैं दुविधामा छु । अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुन विद्यार्थीले कुन विषय छान्ने ? के अप्सन छ ? मैले त अप्सन नै देख्दिनँ । किनभने अहिले विद्यार्थीका लागि साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज बाहेक अरु विकल्प छैन । अब यहाँ २, ४ दर्जन अप्सन भैरदिएको भए हामीले भन्न हुन्थ्यो । साइन्स पढेर डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने, म्यानेजमेन्ट पढेर म्यानेजर बन्ने या सिए बन्ने, अब ह्युम्यानिटिज पढेर आफ्नो विषयअनुसारको काम छान्ने भन्ने छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला यो देशको सरकारले विद्यार्थीलाई विषय छान्नका लागि च्वाइस दिनुपर्यो । त्यसपछिमात्र जति पनि अध्ययनका सिलसिलामा विद्यार्थीहरु बाहिरी देशहरुमा गैरहेका छन् । अनि मात्र ती विद्यार्थीहरु देशमै रोकिन्छन् । अहिले विषयको अप्सन नभएकै कारण विद्यार्थीहरु अन्य राष्ट्रमा पलायन भैरहेका छन् । हाम्रो सरकार अहिले पनि कहाँनिर दुविधामा छ भने, राम्रा पढ्ने विद्यार्थीहरु साइन्स पढ्छन् भन्ने भ्रममा छ । यो आजभन्दा ५०÷६० वर्ष पहिलाको फोबिया हो । किनभने त्यहि ५०÷६० वर्ष पहिलाका मान्छेले यो देशमा राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ । उहाँहरुलाई राम्रो पढ्ने भनेको डाक्टर इन्जिनियर नै हो भन्ने छ । तर, डाक्टर इन्जिनियर मात्र होइन देशको स्रोत साधन र सम्भावनाका आधारमा विषय बनाउनुपर्छ । त्यसैले विषय छनोटका विषयमा मैले विद्यार्थीलाई केही सुझाव दिन्न । अहिले विद्यार्थी नै बुझ्ने भैसकेका छन् । पहिला राम्रो पढ्ने विद्यार्थी साइन्समा भर्ना हुन्थे अहिले हाम्रो कलेजमा जीपीए ४ ल्याउने विद्यार्थी म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिजमा भर्ना भैरहेका छन् ।
साउथ वेस्ट्रनका विशेषता के–के हुन् ?
हामीले यहाँका शिक्षकलाई कलेजमा इन्ट्री हुने बित्तिकै तालिम दिन्छौं । शिक्षकहरुलाई नेपाल सरकारले दिएको पाठ्यक्रममा मात्र आधारित नभएर अरिरिक्त कुराहरु गर्नुपर्छ भन्छौं । ग्लोबल सोसाइटीमा टिचिङ एण्ड लर्निङको मोडालिटी अनुसार मिल्ने तरिकाले हामीले अध्यापन गराउनुपर्छ भनेर शिक्षकहरुलाई सिकाएका छौं । अर्को कुरा हाम्रो कलेजबाट अध्ययन गरिसकेर बाहिरिने विद्यार्थीलाई आत्मविश्वासका साथ काम गर्न, कुरा गर्न, बोल्न सक्ने बनाउँछौं । साथै, हाम्रो कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरु विदेशका कुनैपनि युनिभर्सिटीमा जाँदा हाम्रो टिचिङ मेथोलोजी त्यहाँको युतिभर्सिटीहरुसँग मिल्दोजुल्दो छ । यस्तै हामी विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय भ्रमण गराउँछौं । हामी आइएसओ सर्टिफाइड भएको कलेज पनि हांै । जसले गर्दा इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनको जुन मापदण्ड छ त्यही अनुसार नै काम गर्छौँ । जसले हाम्रा विद्यार्थीहरुमा अरु देशका युनिभर्सिटीमा जाँदा कन्फ्युज नहोस् ।
कोभिड–१९ को विषम परिस्थितीमा निजी शैक्षिक संस्थाका लागि सरकारले के गर्दियोस् भन्ने अपेक्षा छ ?
प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानका साथीहरुले व्याजका कुरा, ऋणका कुराहरु उठाइसक्नुभएको छ । तर यी कुरा सरकारले सुनेकै छैन । यो विषम परिस्थितीमा स्कुल कलेजहरु आफ्नै तरिकाले बाँचिरहेका छन् । यतिबेला सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरुमा छुट्टै निती ल्याउनुपथ्र्यो । यी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बेग्लै निती नल्याउनु बिडम्बना हो ।